Dagaal culus oo saaka ka dhacay degaan ka tirsan Shabeellaha Dhexe | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Dagaal culus oo saaka ka dhacay degaan ka tirsan Shabeellaha Dhexe
Dagaal culus oo saaka ka dhacay degaan ka tirsan Shabeellaha Dhexe
written by warsan radio 11/01/2022
Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab ayaa saaka waxaa ay weerar ku qaadeen Saldhig Ciidamo katirsan Millateriga Soomaaliya ku leeyihiin tuulada Qalimow oo hoostagta degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe kuna yaalla inta u dhaxeeysa degmada Balcad & Magaalada Jowhar.
Dadka Tuulada ayaa ku waramay in dagaal culus oo socday in ka badan Saacad uu ka dhacay Tuulada Qalimow, waxaana dagaalka ku dhintay Saddex Askari oo ka tirsan Ciidanka dowladda halka Afar kale ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo loo soo qaaday Magaalada Muqdisho.
Al-Shabaab oo ka hadlay dagaalkaas ayaa Warbaahintooda tebisay in weerarka ay ku qaadeen Tuulada Qalimow ay kula wareegeen, isla markaana ay ku qabsadeen saanado melleteri, in kastoo aysan jirin warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada Al-Shabaab.
Saraakiil ka tirsan Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qeybta 27aad ayaa dhankooda waxaa ay sheegeen inay fashiliyeen weerarkii kaga yimid Al-Shabaab, isla markaana khasaaro ay gaarsiiyeen.
Maalmo ka hor ayay aheyd markii Ciidamada dowladda Soomaaliya ay howlgal ka sameeyeen Tuulada Qalimow iyo degaano u dhow dhow oo ay gacanta ku hayeen Ururka Al-Shabaab.
Dagaal culus oo saaka ka dhacay degaan ka tirsan Shabeellaha Dhexe was last modified: January 11th, 2022 by warsan radio
Madaxweynaha Mareykanka oo la-taliye sare u magacaabay Xamse Warfaa oo Soomaali ah
Dhageyso:-Warka Galabnimo ee Idaacada Warsan
Dad qaba cudurka Covid-19 oo lagu arkay xerada qaxootiga ee Dhadhaab
Dhageyso:-Barnaamijka Cadaalad oo Maanta looga Hadley Xadgudubyada Galmada.
Iska hor imaad khasaaro geestay oo dhax maray Ciidamada Hindiya iyo kuwa Shiinaha
Akhriso:-Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo sheegay in dilkii Khashoggi uu ahaa mid hore loo qorsheeayy
Ururka Al-Shabaab oo sii daayay dhakhaatiir u dhashay Cuba oo mudo u afduubnaa
Wararkii ugu dambeeyey Dagaal khasaaro dhaliyay oo ka dhacay Gobolka Gedo